ကျွန်တော်က fedora သမားပါ
Myanmar IT Resource Forum » PLATFORM USING ZONE » » Linux Platforms » » Fedora » ကျွန်တော်က fedora သမားပါ
1 ကျွန်တော်က fedora သမားပါ on 23rd August 2009, 1:29 pm
ဖီဒိုရာ နဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဆွေးနွေးပေးပါမယ်နော်
ဒီမှာ ပို့ တစ်ခုမှ မရှိသေးလို့ အရင် ကြိုရေးလိုက်တာပါ
ကြည့်ရတာ ဖီဒိုရာ သမားမရှိဘူးထင်တယ်နော်
ယူဘန်တူ သမားတွေများတယ်ထင်တယ် တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်ဘူးနော် တစ်မျိုးမထင်ကြပါနဲ့
2 Re: ကျွန်တော်က fedora သမားပါ on 23rd August 2009, 2:32 pm
ဆွေးနွေးသာ ဆွေးနွေးပါဗျာ...ကျွန်တော်တို့က Linux သမားတွေမဟုတ်တော့ တစ်လုံးမှကိုမသိတာ...တစ်လုံးမှလည်းမဆွေးနွေးနိုင်ဘူး
3 Re: ကျွန်တော်က fedora သမားပါ on 23rd August 2009, 9:16 pm
4 Re: ကျွန်တော်က fedora သမားပါ on 24th August 2009, 12:58 pm
ခုလို ကြားရလို့ ကျေးဇူးပါဗျာ..
ကျနော်က ယူဘန်တူ တော့နည်းနည်းသိတယ်ဗျ...
5 Re: ကျွန်တော်က fedora သမားပါ on 18th September 2009, 9:52 am
i am also end user for fedora ... looks like i get some partner .I am now facing some problems with fedora 10... i can't configure wireless device on my notebook by using fedora 10...the other drivers can make appropriate tasks..it 's only wireless.... i try so many ways and still can't solve this problem... my laptop ? ... it's compaq cq 40 344tu ..... .. wireless device 's name is broadcam 4312 ...known as bcm4312....u can share what u know abt fedora and i will reply if i know some information wish i can help u....
6 Re: ကျွန်တော်က fedora သမားပါ on 11th October 2009, 9:47 pm
load balancing တည်ဆောက်ပုံက်ို သိချင်ပါတယ်ဗျ
7 Re: ကျွန်တော်က fedora သမားပါ on 11th October 2009, 10:09 pm
ရှိနိုင်ပါတယ်.. ( ကျွန်တော်မဟုတ် )
8 Re: ကျွန်တော်က fedora သမားပါ on 11th October 2009, 10:20 pm
ဒါလိုမျိုး လွယ်လွယ်ဖြေတဲ့ပုံနဲ့တော့ fedora သမားပါဆိုတာလည်း လွယ်လွယ်ပြောတာလား
အမှန်ဆိုရင် ဘယ်ကိုသွားပါ ။ ဘယ်လိုဆို အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ site ကိုပြောရမှာ မဟုတ်လား
site တွေကိုလည်း လွယ်လွယ်ပြောဖို့တော့ မသင့်တော်ပါဘူး
9 Re: ကျွန်တော်က fedora သမားပါ on 12th October 2009, 10:13 am
.....i think u 'd better check this link....i can't give any comment to that link cos..i don't know how to create load balancing ...i don't want u to blame me..cos..just in case this link isn't solve u out....i just tried ....hope this will help u...
10 Re: ကျွန်တော်က fedora သမားပါ on 21st October 2009, 12:02 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-07-13
ကျနော်ကတော့လင်းနစ်အကြောင်းမပြောနဲ့ ဝင်းဒိုးတောင်ကောင်းကောင်းမသိသေးလို့ ပါ
11 Re: ကျွန်တော်က fedora သမားပါ on 26th December 2009, 2:49 pm
cafezee ဟက်နည်း ဖြန့်ခဲ့တဲ့ ကိုဂျိုးလားဗျ...
12 Re: ကျွန်တော်က fedora သမားပါ on 26th December 2009, 5:50 pm
Cafezee hack နည်းကိုဖြန့်တဲ့အစ်ကိုနစ်က JOEJOE ပါ။ ဒီမှာပဲရှိတယ် ကို သရဲရေ....
13 Re: ကျွန်တော်က fedora သမားပါ on 27th December 2009, 12:26 pm
အဲဒီနည်းကိုစတွေ့တုန်းက တော်တော်ပျော်သွားတယ်... ဟိ
14 Re: ကျွန်တော်က fedora သမားပါ on 9th December 2012, 10:30 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2011-01-29
plz, update လေးတင်ပေးပါဗျာ. . စာအရမ်း ဖတ်ချင်လို့ပါ . . .
15 Re: ကျွန်တော်က fedora သမားပါ